Adeegyada Wakiil ee Diiwaangashan ee ugu Fiican
Gobol kasta wuxuu leeyahay waajibaad sharciyeed ganacsiyada inay lahaadaan wakiil diiwaangashan. Tani waa run marka la bilaabayo, ganacsiyada yaryar, LLC-yada, iyo shirkadaha.
Waa maxay wakiilka diiwaangashan?
Adeegyadan waxay gacan ka geysanayaan xaqiijinta u hoggaansamida buuxda ee gobolkaaga inta lagu jiro bilowga iyo geeddi-socodka muddada-dheer ee hawlgalkaaga. Waxaa la heli karaa inta lagu jiro saacadaha shaqada si ay ula tacaalaan waraaqaha hay'adaha dawladda adiga oo ku metelaya. Ka gaabinta dayactirka adeegga wakiilka diiwaangashan waxay dhaawici kartaa ganacsigaaga. Xaaladaha qaarkood, gobolku wuxuu kala diri karaa ganacsi u oggolaanaya in wakiillada diiwaangashan ay dhacaan.
Ingobolada qaarkood waxaad u dhaqmi kartaa sidii wakiilkaaga diiwaangashan. Laakiin taasi waxay ka dhigan tahay inaad qaadi doontid xilalkan oo aad marwalba diyaar tahay inta lagu jiro saacadaha shaqada. Waxay sidoo kale u soo bandhigeysaa macluumaadkaaga shakhsiyeed dadweynaha, taas oo dadka badankood ay rabaan inay iska ilaaliyaan. Haddii aad ganacsi cusub furaysid ama aad u baahan tahay inaad beddesho wakiilkaaga diiwaangashan, hagahan ayaa kaa caawin doona inaad hesho adeegga wakiilka ugu diiwaangashan ee ganacsigaaga.
Top 6 Agent Services Registered
Wakiilka Diiwaangashan ee Northwest
- Adeegga macaamiisha ugufiican
Booqo Northwest RA Laga bilaabo $ 125 Wareejinta Boostada Bilaashka ah g
Tilmaamaha Shirkadaha Foomamka Xaaladda ee Hore loo buuxiyey
Iyadoo "wakiilka diiwaangashan" magaca, ma ahan wax la yaab leh in la arko
Wakiilka Ka Diiwaangashan Northwest
wuxuu kujiraa meel aad uwanaagsan liiskayaga.
Laga bilaabo bilawga ganacsigaaga si aad ugu ilaaliso ganacsigaaga hagaha shirkada, Adeegyada wakiilka diiwaangashan ee adeeg bixiyahan ayaa ah kuwa labaad. Wixii ku saabsan LLCs iyo shirkadaha, wakiilka ka diiwaangashan Northwest wuxuu noqon doonaa dookha koowaad ee laga fiirsado.
Waxay haystaan ​​wax kasta oo aad u baahan karto ama aad ugu baahan karto adeegga wakiilka diiwaangashan. Qorshaha waxaa kujira faa iidooyin sida: foomamka xaalada horay loo buuxiyay
xasuusinta warbixin sanadeedka
dukumiintiyada iyo kaydinta dukumiintiyada
Is-adeegsiga khadka tooska ah marin u helka
U dirista boostada bilaashka ah
Isku maalin isla baaritaanada maxaliga ah
Waxaad sidoo kale kaheli doontaa taageerada nolosha oo dhan shirkada haga hagaha Agent diiwaangashan Northwest. Khubaradan iibka ah ayaa kaa caawin doona inaad bilowdo oo aad dayactirto ganacsigaaga iyada oo laga taageerayo wax ka baxsan gaadhista dhaqameed ee wakiilka diiwaangashan.
Adeeggan ayaa ku kacaya $ 125 sanadkii. Haddii aad u baahan tahay wakiil ka diiwaangashan shan gobol ama in ka badan, sicirka ayaa hoos ugu dhacaya $ 100.
Ka bilow Wakiil Waqooyiga-galbeed ka diiwaangashan maanta
# 2 - Incfile - Adeegyada Wakiil ee Diiwaangashan ee Bilaashka ah
Booqo Macluumaadka Wakiil bilaash ah oo diiwaangashan 1 sano
Cusbooneysiinta $ 119 Boostada otomaatigga ah
Emailka iyo digniinta SMS
Ku bilaw bilaash!
waa adeeg abuur ganacsi oo leh dalabyo badan. Waxaa isticmaalay in ka badan 500,000 oo ganacsi 15-kii sano ee la soo dhaafay. >
Taasi waa sax. Haddii aad isticmaasho Incfile si aad u sameysato LLC-gaaga ama shirkaddaada, waxaad heli doontaa wakiil bilaash ah oo diiwaangashan sannadka ugu horreeya. Kaliya waa inaad bixisaa khidmadaha gobolka. iyo qorshayaasha Platinum waxay ka bilowdaan $ 149 iyo $ 299, siday u kala horreeyaan. Laakiin seddexduba waxay la yimaadaan wakiil diiwaangashan oo bilaash ah.:
Waxaa loo heli karaa si loo helo waraaqaha waraaqaha IRS iyo dacwadaha sharciga ah adiga oo matalaya adiga Emailka iyo ogeysiisyada SMS marka la helayo dukumiintiyada 24/7 marinka khadka tooska ah
Dashbood khadka toosan oo fudud oo dareen leh
Fariin otomaatig ah gudbinta
Khadka tooska ah ee loo yaqaan 'Dashboard Incfile's line' ayaa hubaal ka muuqda inta ka hartay suuqa maanta. Inta udhaxeysa dirista boostada iyo digniinta, tani runti waa adeeg gaar ah.
Qiimaha caadiga ah ee adeega wakiilka diiwaangashan ee Incfile waa $ 119. Haddii aad iska diiwaangeliso mid ka mid ah qorshooyinka ganacsiga, qorshahaagu wuxuu cusbooneysiin doonaa sicirkaas ka dib sannadka bilaashka ah ee ugu horreeya.
Kuwa idinka mid ah ee leh ganacsi jira, Kharashka isbeddelka wakiilka ee Macluumaadka wuxuu ka bilaabmayaa $ 49, oo lagu daray khidmadaha gobolka.
Ka taxaddar sameynta ganacsi oo aad hesho wakiil diiwaangashan oo bilaash ah
iyada oo loo marayo Incfile.inta badan diiwaangashan noocyada kala duwan ee ts
Booqo Filimada Swyft
Wakiilada ka diiwaangashan $ 149
Helitaanka dukumiintiyada khadka tooska ah
Qarsoodiga iyo u hogaansanaanta dammaanad Bilow
Filimada Swyft waa magac kale oo caan ah laguna kalsoon yahay dunida wakiilka diiwaangashan. Waxay adeegyo u fidiyaan LLCs, C-Corps, S-Corps, iyo ururrada aan macaash doonka ahayn. Markaa iyada oo aan loo eegin nooca hay'adda, baaxadda meheraddaada ama meheraddaada. Ikhtiyaar in la tixgeliyo. Filimada Swyft waxay ka diiwaangashan tahay adeegyo wakiil oo laga heli karo dhamaan 50ka gobol.
Bilaabistu waa fududahay. Si fudud u buuxi foomka su'aalaha tooska ah ee tooska ah ee lagu diiwaan geliyo. Markaad isdiiwaangaliso, Filimada Swyft waxay isticmaashaa tikniyoolajiyad otomaatik ah oo kuu soo diraysa xusuusin waqtiyaysan si loo hubiyo u hogaansanaanta. Adeeggawuxuu ka bilaabmaa $ 149 oo si toos ah ayuu u cusbooneysiiyaa. Markaa uma baahnid inaad ka walwasho adeeggaagu dhacayo.
Waxaad kaliya bixinaysaa wadar ahaan mana u baahnid inaad ka walwasho kharashyada qarsoon ama lacagaha dheeraadka ah.
Swyft Filings ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud u eeg dukumiintiyada rasmiga ah ee internetka lagu soo galiyay wakiilkaaga diiwaangashan. Adeeggu waa aamin yahay, la isku halleyn karo wuxuuna ilaaliyaa arimahaaga gaarka ah.
Waa in sidoo kale la ogaadaa in Filimada Swyft ay sidoo kale kuu fidiso dhowr qorshe oo ganacsi bilow ah oo aad adigu ka dooran karto. Xirmooyinkaani waxay ka bilaabanayaan kaliya $ 49 oo lagu daray khidmada gobolka. Si kastaba ha noqotee, wakiil diiwaangashan kuma jiraan adeegyadan. Ka bilow Filimada Swyft maanta . # 4 - ZenBusiness - Adeegyada Agent ee ugu Fiican ee ka diiwaangashan LLCs
Laga bilaabo $ 99
Qorsheyaasha tababarka ee lagu daray
Helitaanka dukumiintiyada qadka
Asturnaanta iyo Badbaadinta Bilaabidda
ZenBusiness waa mid ka mid ah magacyada ugu caansan uguna magaca badan dhinaca abuurista ganacsiga. In kasta oo shirkaddu si dhab ah loogu yaqaanno adeegyadooda sameynta LLC, waxay sidoo kale bixiyaan adeegyo wakiillo diiwaangashan oo aad u wanaagsan. Haddii aad isticmaaleyso ZenBusiness si aad u bilowdo LLC-gaaga, macno ayey leedahay inaad hesho wakiil ka diiwaangashan dhinacooda. sidoo kale. LLC. Waxa kale oo ay ku dareysaa lakabka asturnaanta iyo ilaalinta ganacsigaaga.
ZenBusiness waxay aqbali doontaa dhammaan dukumiintiyada muhiimka ah ee sharciga ah Wax walbana waxaa lagu geyn doonaa dashboor habeysan oo abaabulan si aad u aragto, u daabacato, ama u soo degsato markasta.
Adeegyada wakiilka diiwaangashan waxay ka bilaabmaan $ 99 sanadkii.
Laakiin haddii aad isticmaaleyso ZenBusiness si aadShirkad ahaan, adeegyadooda wakiilka diiwaangashan waxaa lagu daraa qorshe kasta. Qorshayaashani waxay ka bilaabmayaan $ 129, markaa macno ayey samaynaysaa in la isku geeyo adeegga s. >
# 5 - MyCorporation - Ku Haboon Ganacsiyada Yaryar
Booqo MyCorporation Laga bilaabo $ 120 Lacag la’aanta EIN ee bilaashka ah ee tababarka
RA oo ay kujiraan xirmooyinka tababarka qaarkood
ayaa jirtay in ka badan 20 sano. Laga soo bilaabo 1998, waxay gacan ka geysteen abuurista in ka badan hal milyan oo ganacsi dhammaan 50-ka gobol.
Bilaabidda waa fududahay. Kaliya tag bogga oo buuxi foom deg deg ah adoo adeegsanayaxariiq. MyCorporation waxay bixisaa adeegyo wakiil diiwaangashan oo loogu talagalay LLC-yada iyo shirkadaha. Waa kuwan waxa aad ka heli doontid adeeggan:
Aqbal dukumiintiyada rasmiga ah iyo kuwa sharciga ah adiga oo wakiil kaa ah
U gudbi dukumiintiyada sharciga ah milkiilaha ganacsiga
Ku dar qarsoodi
Hesho adeegga waxqabadka ee ganacsigaaga marka 'tallaabada sharciga ah
Wakiil diiwaangashan Adeegyada MyCorporation waxay ka bilaabmaan $ 120. Sicirka ayaa cusbooneysiiya sanad walba. Waxa kale oo aad ku dari kartaa MyIncGuard qorshahaaga, oo ay ku jiraan xusuusinta iyo aaladaha sannadka oo dhan. Kuwa idinka mid ah ee bilaabaya ganacsi cusub, adeegyada wakiilka diiwaangashan ayaa la siiyaa. Sida caadiga u ah baakadaha Deluxe iyo Premium. Kuwaani waxay ka bilowdaan $ 224 iyo $ 324, siday u kala horreeyaan. Haddii aad u isticmaasho MyCorporation si aad u bilawdo ganacsigaaga,
waxaad heli doontaa deebaaji EIN ahbilaash .
# 6 - MyCompanyWorks - Waxay kufiican tahay badalida wakiilada diiwaangashan
Waxba kama badalno khidmadaha wakiilka
tababarka shirkadda ee LLC iyo Corps
Dammaanad Qancin 100%
waa xulasho kale oo caan ah oo ku saabsan dhanka abuurista ganacsiga. Waxay bixiyaan tababarro iyo adeegyo wakiillo diiwaangashan oo loogu talagalay LLC-yada, c-corps iyo s-corps.
Ilaa 2001, in kabadan 60,000 shirkado dalka oo dhan ah ayaa aaminay MyCompanyWorks adeegyadooda.
MyCompanyWorks waxay adeegyo u fidisaa wakiilka ka diiwaan gashan dhamaan 50ka gobol Waan jeclahay MyCompanyWorks sababta oo ah way badanyihiin. Adeegyadu waa ku habboon yihiin qof kasta oo bilaabaya ganacsi cusub iyo sidoo kale milkiileyaasha ganacsiyada doonaya inay ku beddelaan wakiilkooda diiwaangashan ganacsigooda.waa jira. Faa'iidooyinka adeegyada wakiilka diiwaangashan ee adeeg bixiyahan waxaa ka mid ah:
Hubso u hogaansanaanta sharciga
Ku soo hel boostada adiga oo ku hadlaya
Fudud khadka tooska ah cusbooneysii
Ogeysiisyada degdegga ah ee gaarsiinta nidaamka, foomamka, iwm. 99 sanadkiiba.
Haddii meheraddaadu hore u aasaastay oo aad raadineyso inaad bedesho wakiilkaaga diiwaangashan, MyCompanyWorks ma beddelayo. ha ku darin lacag dheeraad ah isbeddelka. Adeegyada wakiillada diiwaangashan ayaa sidoo kale lagu daray xirmada bilowga ganacsiga oo buuxa, laga bilaabo $ 279. Haddii kale, waxaad ku dari kartaa adeegga mid ka mid ah qorshooyinka tababarka kale, oo ka bilaabma $ 79.
MyCompanyWorks qorshayaasha waxaa lagu taageerayaa dammaanad-celin 90-maalmood ah oo lacag celin ah
Sida loo helor adeegyada wakiilka kuu diiwaangashan ee adiga kuugu wanaagsan
Si ka soo horjeedda aaminaadda caanka ah, maahan dhammaan adeegyada wakiilka diiwaangashan inay isku mid yihiin. Qaar ka mid ah xulashooyinkaas ayaa xaqiiqdii ka fiican kuwa kale. Iyada oo xulashooyin badan la tixgalinayo, way adkaan kartaa in la helo adeega wakiilka ugu fiican ee diiwaangashan ganacsigaaga.
Waxaa jira qodobo ay tahay inaad tixgeliso markaad qiimeyneyso adeegyo kala duwan. Inaad maskaxda ku hayso waxyaabaha soo socda markaad socotaan waxay noloshaada ka dhigaysaa mid aad u fudud: Nooca Shirkad Ganacsi Ganacsi noocee ah ayaad bilaabeysaa? Ama urur noocee ah ayaad hada haysataa? Inta badan wakiilada diiwaangashan waxay la shaqeyn doonaan dhamaan noocyada hay'adaha, laakiin qaarkood waxay si cad ugu habboon yihiin midkood midka kale. LLC-yada ma isticmaali karaan isla adeegga wakiilka diiwaangashan sida S-Corp. Qaar ka mid ah wakiilada diiwaangashan ayaa ugafiican ururada inay iibsadaant aan faa'iido doon ahayn.
wax yar ka sii qod qod si aad u aragto noocyada hay'adaha wakiilka diiwaangashan ee aad qorsheynayso inaad la shaqeyso Haddii ay la shaqeynayaan shirkado la mid ah kuwaaga, kani waa inuu noqdaa xal wanaagsan.
Raadi adeeg kuu soo diri doona SMS ama xusuusinta iimaylka si loo hubiyo inaadan dhaafin wax kama dambeys ah ama shuruudo. Adeegyada qaarkood waxay ka yimaadaan agabyo dheeri ah iyo tilmaamaha u hoggaansamida. Way fududahay in la sheego farqiga u dhexeeya adeegga wakiilka diiwaangashan ee kaliya sameeya inta ugu yar iyo kuwa u sii socda masaafada dheeriga ah. wakiil diiwaangashan. Cinwaanka wakiilka diiwaangashan waxaa lagu qori doonaa diiwaanka dadweynaha, maahan cinwaanka gurigaaga ama xafiiskaaga.
DukumintiyadaXiriirinta sharciga iyo dowladda waxaa lagu fududeyn karaa wakiilkaaga diiwaangashan. Qaarkood waxay soo bandhigi doonaan gudbinta boostada oo ka duwan kaliya kaydinta boosta. Kuwa kale waxay si aamin ah ugu soo rogayaan dukumiintiyada dashboard-ka khadka tooska ah ee aad ka heli karto meel fog.
Adeegyada Horumarinta Ganacsiga
Inta badan dadka raadinaya adeega wakiilka diiwaangashan ayaa bilaabaya ganacsi cusub. Macno ayey leedahay in hal shirkad loo isticmaalo labada adeegba.
Xaqiiqdii, adeegyo badan oo ganacsi bilow ah ayaa waliba kaa dhigaya inaad u isticmaasho wakiil diiwaangashan. Qaarkood waxay ku siin doonaan sanad bilaash ah adeegyada wakiilka diiwaangashan markaad isqorto qorshaha bilowga ah.
Haddii aad horey u laheyd ganacsi jira oo kaliya aad ubaahantahay inaad bedesho wakiilkaaga diiwaangashan, adeegyada bilowga ganacsiga ayaa sidaan muhiim u ahaynama adiga kuu ah.
Qiimaha adeegyada wakiilka diiwaangashan ayaa sida caadiga ah hoos u dhaca ilaa $ 100 sanadkiiba. Waxaad ku heli kartaa qaar $ 50 ka badan ama ka yar. Laakiin guud ahaan marka laga hadlayo, maahan inaad waxbadan bixisid.
Shirkadaha qaar waxay qareenkooda u isticmaalaan wakiil diiwaangashan. Laakiin waxay ku kacaysaa wax badan oo ka badan marka loo eego adeegyada dib loogu eegay tusahan. saamiga waxqabadka.
Wakiilkaaga diiwaangashan waa inuu halkaa u joogaa si uu kuu caawiyo haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahato caawimaad. tani waa arrin muhiim ah oo badanaa la iska indhatiro wakiilka qiimeynta adeegga diiwaangashan. Waxaan kugula talinayaa inaad aqriso dib u eegista macaamiisha kahor intaadan qaadan go'aanka ugu dambeeya. Dib-u-eegeyaasha badankood way xusaanwaxay lahaan doontaa wax ku saabsan kaalmada (ha fiicnaato ama ha xumaato). Hadaladani waxay kaa caawin karaan inaad si uun u rogrogto dhinac ama dhinac kale haddii aad u dhexeyso dhowr ikhtiyaar.
Gunaanad Waa maxay adeegga wakiilka ugu diiwaangashan? Waxay kuxirantahay waxaad raadineyso.
Wakiilka Diiwaangashan ee Waqooyi-galbeed waa xulashadeenna ugu sareysa ee adeegga macaamiisha maadaama ay ka sarreeyaan kana sii gudbaan baahidaada. Incfile wuxuu bixiyaa adeegyo wakiil diiwaangashan oo bilaash ah markaad isqorto xirmo ganacsi bilow ah. Filimada Swyft waxay qorsheyneysaa inay qaabeyso dhamaan noocyada shirkadaha ganacsiga. Ganacsiyada yaryar waa inay u jeestaan ​​adeegyada MyCorporation. Kuwa idinka mid ah ee raadinaya inaad beddelaan wakiillada diiwaangashan, MyCompanyWorks kama qaadaan lacagta wakiilka beddelashada.
Iyadoo aan loo eegin nooca ganacsigaaga ama bHadday sidaas tahay, waxaad ka heli kartaa adeegga wakiilka ugu diiwaangashan adiga adoo raacaya talooyinka ku jira tilmaamahan. >
Nashqadee bogga soo degitaanka iyadoo la adeegsanayo waxyaabaha kiciya maskaxda
2021-06-20 08:35:45 | Degel
Ujeedada bogga degitaanku waa in la helo booqdayaasha si ay tallaabo u qaadaan, haddii ay tahay inay iibsadaan alaab, inay ku biiraan liiska emaylka, inay bilaabaan tijaabo bilaash ah, ama wax kale. Laakiin sida hadaf kasta, uma baahnid oo keliya inaad "rajo "in la gaari doono. Waxaad ubaahantahay i...
Sida loo dejiyo dheefaha shaqaalaha
2021-06-19 20:20:24 | Degel
Iyadoo aan loo eegin baaxadda meheradda, mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee shaqaalaha looga dhigi karo mid faraxsan, daacad ah oo wax soo saar leh ayaa leh xirmo faa'iidooyin badan leh. Haysashada nidaam dejin cad oo loogu talagalay barnaamijkaaga waxtarrada ayaa kaa caawin doonta yareynta jahw...
Hagaha bilowga ah ee qorshooyinka gunnada shaqaalaha
2021-06-19 20:14:32 | Degel
Qorshayaasha gunnada shaqaalaha waa hab fiican oo lagu dhiirrigeliyo shaqaalahaaga inay horumariyaan ama joogteeyaan waxqabadkooda shaqada si loo gaaro himilooyin ganacsi oo cusub. Laakiin dhisidda qorshe gunno shaqaale oo caddaalad iyo dhiirrigelin leh ayaa ku caawin karta. fursado loo siman yahay ...